Bolivia: Atrikasa Web 2.0 Ho An’ny Mpampianatra Aymara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2012 8:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Aymara, Français, 日本語, Español
Andiana atrikasa Web 2.0 no notontosaina tao amin’ny departemantan’i Oruro ao Bolivia tamin’ny 2 Mey sy 3 Mey 2012. Nokarakarain’ny Minisitireran'ny Fampianarana sy ny tetikasa Jaqi Aru izany atrikasa izany. Tetikasa izay ahitana vondrona mpandalina teny ao an-tanànan’i El Alto, Bolivia. Nampiroborobo ny fampiasana ny teny Aymara tamin’ny aterineto ity vondrona ity. Maro tamin’ireo mpilatsaka an-tsitrapon’ny Global Voices Aymara ihany koa no ao anatin’ny Jaqi Aru. Mpampianatra momba ny fampianarana avy ao amin’ny Sekoly Ambony Mpampiofana Mpampianatra (ESFM ny fanafohezan-teny amin’ny espaniola) no nandray anjara tamin’ny atrikasa. Ny hanampy ireo mpampianatra sy ny mpianany hahay hamorona votoaty amin’ny teny Aymara ao amin’ny aterineto no tanjon’ny atrikasa.
Taorian’izany fampahafantarana izany, nilazalaza momba ny Web 2.0 sy ny Wikipedia i Mario Duran Chuquimia. Nandritra ny atoandro, nisy ny atrikasa fampiharana natao tao amin’ny efitrano misy ny solosaina, ka nampiasa solosaina iray avy misy aterineto ireo mpampianatra tamin’izany;
Nikarakara atrikasa momba ny tranokala tambazotra sosialy kosa i Martin Canaviri, izay nifantoka tanteraka tamin’ny fampiasana ny Facebook, Ruben Hilare kosa nizara ny traikefany amin’ny fampiasana Twitter. Farany, Victor Paco Montevilla nampahafantatra momba ny fampiasana sary sy ny famoahana izany amin’ny tranonkala Flickr.
Nanazava momba ny famahanam-bolongana amin’ny WordPress kosa i Elias Quispe tamin’ny Zoma 4 Mey, Nampahafantatra ny Skype tamin’ireo mpandray anjara kosa i Edwin Quispe. Navoakan’I Hilare tao amin’ny Wikipedia Aymara avy eo ny fandehan’ny atrikasa.
Jaqi Aru namoaka lahatsoratra bilaogy [amin’ny teny aymara] mikasika ny atrikasa, namoaka ity lahatsary manaraka nandritra ny atrikasa ity ihany koa izy ireo tao anatin’ny bilaogy: